Xulalka Qaramada Germany & Spain Oo Barbaro Galay, Cristiano Ronaldo Oo Mohamed Salah Laba Gool Ugu Jawaabay Iyo Portugal Oo Guul Cajiib Ah Gaadhay. | JAALENEWS
Xulalka Qaramada Germany & Spain Oo Barbaro Galay, Cristiano Ronaldo Oo Mohamed Salah Laba Gool Ugu Jawaabay Iyo Portugal Oo Guul Cajiib Ah Gaadhay.
Published on March 24, 2018 by admin · No Comments
Xulalka qaramada Spain iyo Germany ayaa kulan xiiso badan oo ay iskaga hor yimaadeen barbaro ku galay waxayna ku kala baxeen barbaro 1-1 ah iyada oo Spain goolka ku hormartay waxaana u dhaliyay Rodrigo laakiin Thomas Muller ayaa gool cajiib ah ku barbareeyay. Dhinaca kale xulka qaranka Portugal ayaa daqiiqadihii dheeriga ahaa ee lagu daray kulankii Egypt waxay ku gaadheen guul 2-1 ah iyada oo markii hore 1-0 hogaanka looga hayay.
Cristiano Ronaldo ayaa laba gool dhaliyay intii lagu jiray waqtiga dheeriga ahaa ee kulankan isaga oo labadan gool ugu jawaabay Mohamed Salah oo xulka qarankiisa Masar u dhaliyay goolka ay hogaanka ciyaarta ku hayeen ilaa daqiqiadii 92 aad wixii ka horeeyay.
Xulalka qaramada Spain iyo Germany oo ka mid ah dalalka sida wayn loogu saadaalinayo ku guulaysiga koobka aduunka ee Russia 2018 ayaa kulan xiiso badan isla markaana ka badan kulan saaxiibtinimo iskaga hor yimid wuxuuna ahaa kulan ay xidigaha labada xul qaran ku soo bandhigeen awood ciyaareed iyo waliba xamaasad wayn oo muujinaysa in Germany iyo Spain aanu kulankoodu ahayn mid saaxiibtinimo.
DAQIIQADII 6 AAD Xulka qaranka Spain ayaa markiiba helay goolka furitaanka kadib markii uu Rodrigo Moreno uu si qurux badan u dhamaystiray kubbad caawin cajiib ah oo uu Andres Iniesta sameeyay wuxuuna goolkani yimid waqti ay Spain culays badan ku abuuraysay Germany iyada o ciyaartu noqotay 1-0 ay Spain hogaanka ciyaarta ugu qabtay.
Xulka qaranka Spain ayaa markiiba jaanta iyo jiibta si layaableh iskula helay waxaana Germany ku adkaatay in ay kubbada si sahlan u helaan ama iskugu dhiibtaan waxaana la filan karayay in Spain ay goolka labaad ku sii darsato hogaanka ciyaarta.Laakiin Germany ayaa ciyaarta si gaabis ah ugu soo laabtay waxayna markooda baadi goob dheer u galeen sidii ay goolka barbaraha u keensan lahaayeen waxaana jiray fursado labada dhinac ah oo goolal lagu raadinayay laakiin David Silva ayaa lumiyay fursad uu Germany xaalada ugu sii xumayn kari lahaa.
DAQIIQADII 35 aad Alla Muxuu Gool ahaa! Xulka qaranka Germany ayaa ugu danbayn helay goolka barbaraha ee ay ciyaarta ugu soo laabteen wuxuuna ahaa gool caalami ah oo uu Thamas Mullers si layaableh ugu goyn gaadhay shabaqa uu David De Gea ilaashanayay ee xulka qaranka Spain, wuxuuna Miller kubbad gantaal ah oo uu ka soo tuuray meel ka baxsan xerada ganaaxa uu ku dhaliyay goolka uu ciyaarta kaga dhigay barbaraha 1-1 ka ah.
Toni Kroos iyo Khedira oo goolkan caawintiis lahaa ayaa kubbada si fiican u soo wada ciyaaray ka hor intii aanu Muller gookan dhalin waxayna ciyaartu noqotay mid xiiso badan iyada oo awooda ciyaareed ee Germany iyo Spain ay isceshatay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ay labada xul qaranba abuureen fursado fiican oo goolal kale lagu dhalin karayay ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta sidii dhaqanka u ahayd kulan saaxiibtinimo labada tababare ayaa bilaabay in ay isbadalo badan shaxahooda ku sameeyaan laakiin xamaasada ciyaarta ayaan hoos u dhicin wuxuuna xul kastaaba raadinayay goolka labaad.
DAQIIQADII 65 AAD Xulka qaranka Germany ayaa ugu dhawaaday in ay goolka labaad la yimaadaan kadib markii uu Kroos kubbad laaga xorta ah uu soo tuuray waxaana birta goolka Spain darbo ku garaacay Hummels kaas oo De Gea aan wax badbaadin ah siin laakiin nasiibkiisa xumaaday waxa uu arkay birta goolka oo ka beenisay.
Labada tababare ayaa isbadalo badan sii sameeyay laakiin waxay labada xul qaran ku dhibtoonayeen in ay keensadaan goolka labaad iyada oo ay adkaatay in gool kale la dhaliyaa.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 1-1 ah oo ay Spain iyo Germany ku kala baxeen iyada oo qaybtii hore ee ciyaarta ahayd tan ugu xiisaha badnayd ee goolasha la kala dhaliyay.
Portugal 2-1 Egypt:
Qaybtii hore ee kulankii Portugal iyo Egypt ayaa ahaa mid aan wax goolal ah layska dhalin iyada oo si wayn isha loogu hayay labada xidig ee qaab ciyaareedka fiican ku jira ee Cristiano Ronaldo iyo Mohamed Salah laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay babraro gool la’aan ah.
Laakiin daqiiqadii 56 aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta ayuu xulka qaranka Masar helay goolka furitaanka kadib markii uu Mohamed Salah dhaliyay goolkan isaga oo caawin ka helay Abdalla El Said waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Masar hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Laakiin xulka qaranka Portugal ayaa si adag ugu dagaalamay in ay ciyaarta dib ugu soo laabtaan waxayna raadiyeen wax walba oo ay u samayn karaan in ay helaan goolka barbaraha.
DAQIIQADII 92 AAD ee waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta ayuu xulka qaranka Portugal la yimid goolka barbaraha kadib markii uu Cristiano Ronaldl goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay xidiga ay waqtiga dheer soo wada ciyaarayeen Ricardo Quaresma wuxuuna Ronaldo ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah.
DAQIIQADII 95 AAD Xulka qaranka Portugal ayaa si layaableh ciyaarta guul u gaadhay inkasta oo waqtigii rasmiga ahaa ee 90 ka daqiiqo hogaanka ciyaarta 1-0 looga hayay waxaana marka kale khibradooda isticmaalay Ricardo Quaresma oo caawintii labaad sameeyay iyo Ronaldo oo goolkiisa labaad dhaliyay isla waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta waxayna natiijada ciyaartu si layaableh iskugu badashay 2-1 ay Portugal guul ku gaadheen.